भारतले बन्द गर्‍यो नेपालगञ्ज नाका, यस्तो छ कारण – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > भारतले बन्द गर्‍यो नेपालगञ्ज नाका, यस्तो छ कारण
admin November 9, 2019 Uncategorized	0
भारतले शनिबार बिहानैदेखि नेपालगञ्ज नाका बन्द गरेको छ। भारतको सुप्रिमकोर्टले शनिबार अयोध्याको राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको मुद्दामा फैसला सुनाउने भएकाले भारतीय अधिकारीले नाका सील गरेका हुन् । भारतले नाका सील गरेपछि मात्रै नेपाली अधिकारीलाई मौखिक जानकारी दिइएको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले नाका बन्द गरेकोबारेमा औपचारिक रुपमा जानकारी नआएको बताए । ‘उनीहरुको आज राम मन्दिरबारेको फैसला छ रे । त्यही भएर नाकामा कडाई गरेका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने ।
भारतीय प्रहरीले ‘सुरक्षाको दृष्टिकोण’ ले एक्कासी नाका सील गर्नु परेको बताएको छ । बाँके प्रहरीका प्रवक्ता शिवबहादुर सिंहले भारतीय अधिकारीहरुले बिहानमात्रै नाका सील गरेको बारेमा जानकारी दिएको बताए ।
भारतीय प्रहरीले नेपालबाट कोहीलाई पनि प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सलाई मात्रै जान दिएका छन् । नेपालगञ्ज नाकाबाट भारतीय अस्पतालमा उपचार गर्न ठूलो संख्याका बिरामी जाने भएकाले भारतीय प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई छुट दिएको छ । भारतबाट नेपालतर्फ आउन दिइएको छ ।
बिहान एक्कासी नाका बन्द गरिएपछि नाकामा पुगेका नेपालीहरु अलपत्र भएका थिए । भारततिर जान थालेका नेपाली नाकामा रोकिएका छन् ।
५००मा किनेको एक चिट्ठाले संजीवको चम्कियो भाग्य, रातारात बने करोडपति !
भारतियहरूसँग मस्ती गर्दै गर्दा विर्तामोडबाट ९ जना समातिए
सुध्रिन नसकेकी ‘काण्डकारी’ जवान श्रीमति! जस्ले परपुरूषसँग लागेर गरिन श्रीमानकाे यस्तो दुर्दशा!
पोखरामा पहिरोले पुर्दा एकै गाउँका पाँचको मृत्यु, भागेर बाँच्नेले खुलाए नालीबेली (भिडियो सहित)